ओली-मोदीबीच टेलिफोन सम्बाद ! यस्ता छन् भ्रमण देखि प्रधानमन्त्री सम्मका कुरा
माघ ८, काठमाडाै ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा शुभकामना दिँदै मोदीले भारत स्वागत गर्न प्रतिक्षारत रहेको बताए ।
अाजकाे नयाँपत्रिकामा खवर छ-आइतबार ओलीलाई टेलिफोन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्वागत गर्न भारत प्रतिक्षारत रहेको बताएका हुन् ।
ओली र मोदीबीच करिब ५ मिनेट टेलिफोन सम्बाद भएको थियो । ‘अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री मोदीले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा शुभकामना दिएका छन् । मोदीले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि आफू भारतमा स्वागत गर्न प्रतिक्षारत रहेको बताए । ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्ताव स्वीकार्दै उनलाई पनि नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका छन् । ‘अध्यक्ष ओलीले मोदीलाई रामजानकी मन्दिर र मुक्तिनाथको दर्शन गर्न आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले अघिल्लो नेपाल भ्रमणमा ती तीर्थ स्थल भ्रमणको इच्छा व्यक्त गरेका थिए । टेलिफोन सम्बादमा अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री मोदीबीच अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१८ को शुभकामना आदानप्रदानसमेत भएको छ ।
प्रकाशित मिति : २०७४ माघ ८ गते सोमवार
एमाले महाधिवेशनमा यसरी गरिएकाे छ सुरक्षा व्यवस्थापन
विप्लवकाे प्रश्नः ४७ रुपैयाँमा किनेकाे पेट्रोल १३६ मा बेचेर कुन प्रयोजनमा लगानी गरिन्छ ?
पेट्राेलियम पदार्थकाे मुल्य बढाएकाे भन्दै विप्लवद्वारा नेपाल बन्दकाे घाेषणा
माओवादी केन्द्रले सल्यानका ७ पालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्याे (सुचिसहित)
ओलीले तयार पारे १८ पदाधिकारीको सूची, विष्णु पौडेलकाे आपत्ति (सुचिसहित)
जाजरकोटमा बस दुर्घटना हुँदा ५ को मृत्युु, २७ घाइते
माओवादी शारदा नगरपालिकाको अध्यक्षमा भडेल सर्वसम्मत निर्वाचित